Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Laabtay Dagaalkii Uu Ku Iclaamiyey Xarakada Al-Shabaab.
Thursday April 13, 2017 - 21:21:13 in Wararka by Super Admin
Khudbad uu shaley ka jeediyey wasaaradda gaashaandhigga oo lagu xusayay maalinta ciidanka "Xoogga Dalka" ayuu madaxweynaha DF-ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sheegay in uusan iclaamin dagaal balse uu shaaciyey kaliya in xaalad dagaal la
Khudbad uu shaley ka jeediyey wasaaradda gaashaandhigga oo lagu xusayay maalinta ciidanka "Xoogga Dalka" ayuu madaxweynaha DF-ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sheegay in uusan iclaamin dagaal balse uu shaaciyey kaliya in xaalad dagaal la gudagalay.
Madaxweynaha ayaa todobaadkii la soo dhaafay ka soo hor muuqaday qalabka warbaahinta isagoo ku labisan dareeska Military-ga, Wuxuuna ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Xarakada Al-Shabaab.
Muddo 60 Cisho ah ayuu sidoo kale u qabtay dagaalyahanada Al-Shabaab si ay isku soo dhiibaan.
Laakiin Khudbadiisii shalay wuxuu ku sheegay in uusan iclaamin dagaal ka dhan ah Al-Shabaab balse uu shaaciyey kaliya in dalka uu ku jiro xaalad dagaal, Islamarkaana uusan muddo 60 cisho ah u qaban Xarakada Al-Shabaab.
Waa war rasmi ah oo lagu faafiyay warbaahinta ku hadasha Afka Dowladda Federaalka
Wuxuu sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay in ay wadahadal la furto Shabaab, Haddii ay wadalka diidaana ay la dagaalami doonaan.
Dad badan ayaa arrintan ku tilmaamay dib u garasho xeeladeysan oo uu sameeyey madaxweynaha ka dib markii uu ku deg-degay in uu ku dhawaaqo dagaal aan loo diyaargaroobin, Ayna Xarakada Al-Shabaab qaadday weeraro ka hortag ah oo jawaab u ahaa dagaalka uu ku dhawaaqay Farmaajo.
Xarakada Al-Shabaab ayaa silsilado weeraro ah oo jawaab celin u ahaa duulaanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ka fuliyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaas oo isugu jiray qaraxyo iyo dilal qorsheysan.
Weeraradan ayaa si gaar ah u bartilmaameedsanayey ciidanka Military-ga iyo xarumaha ay ku leeyihiin caasimadda.
Mid ka mid ah weeraradaas oo ahaa weerar Isitsh-haadi ah, waxaa lagu beegsaday Kolonyo ciidan oo uu la socday Taliyaha ciidanka DF, General Cirfiid kaas oo caafimaadkiisa illaa hadda mugdi la gelinayo.
Maalinka dib weerarkaasna Ruux xirnaa dareeska ciidanka oo miineysnaa ayaa isku qarxiyey Xero ciidan oo ku taalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 25 ruux oo isugu jiray Saraakiil iyo ciidamo ka tirsan Military-ga.
Idaacadda Andalus ee ku hadasha Afka-Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay magacyada 14 sarkaal oo ay sheegtay in lagu dilay weerarka, kuwaas oo uu ku jiray Taliyihii xerada iyo mas’uulkii tababarada Badri Sheykh Aadan.
Dad badan oo ay ku jiraan Siyaasiyiin, Aqoonyahano iyo mas’uuliyiin ka tirsan DF ayaa weeraradaas ku tilmaamay cuqubadda ka dhalatay dagaalkii aan loo tabaabusheysan ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha, waxayna qaarkood sheegeen in madaxweynaha uu ku fududaaday arrinkaas.
Lama oga in madaxweynaha uu ka noqoshada dagaalkan uu iclaamiyey kala shuureeyey la taliyeyaashii Ammaanka iyo in garowsaday qaladaadkiisa oo uu aqbalay dhaliilihii kaga imaanayey khubarada iyo siyaasiyiinta.
Inkastoo hadda madaxweynaha uu ka laabtay dagaalkii uu ku dhawaaqay hadana lama oga talaabada xigta ee uu qaadi doono, balse khudbadiisii shaley wuxuu Xarakada Al-Shabaab u qabtay muddo laba sano ah.